Gorsa Imalaa: Waldhabbii daangaa Oromiyaafi Somaalee - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Waldhabbii daangaa dhiheenya kanaan lubbuun namootaa dabreera
Mootummoonni Ingiliizii fi Kaanaadaa, rakkoon nageenyaa daangaa Oromiyaa fi Somaalee, 'na yaaddesseera' jechuun, lammiilee isaanii naannawa sanarraa dhorkaniiru.
Mootummaan Kaanaadaa dhorka imalaa baaseen - sodaan namoota ukkaamsanii fudhachuu daangaa naannolee lamaanii gidduutti akka jiru, akkasumas mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii waraanaa Adda Bilisa Baasa Ogaadeen irratti gaggeessaa jiruun walqabatee, lubbuun namootaa darbaa jira. Kanaaf, lammiileen Kaanaadaa iddoowwan kanneenitti akka hin dhihaanne jedheera.
Mootummaan Ingiliizis, naannoo Harargeetti rakkoon nageenyaa waan jiruuf, 'lammiileen koo kamuu ofeeggannoo guddaa akka taasisan' jetti.
Kana malees, mootummoonni Kaanaadaa, Ameerikaafi Ingiliiz, daangaa Ertiraafi Itiyoophiyaatti, Kaaba Gondar, Naannoo Somaalee Itiyoophiyaatti, akkasumas daangaawwan Sudaaniifi Sudaan Kibbaatti, laammiileen isaanii ofeeggannoon akka socho'an gorsu.
Walididaa daangaa Bulchiinsa Naannoo Somaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa jidduutti ture hiikuuf haaluma bu'uura riifarandamii bara 1997 A.L.I tti geggeeffameen daangeeffamee akka xumuramu waliigalteen Ebla 2009 mallattaa'ee hojiitti galamee ture.
Haata'u malee, erguma waliigalteen kun mallattaa'een booda Godina Harargee Lixaatti lubbuun namoota nagaa 10, humnoota hidhattoota Somaaleetiin ajjeefamuu fi kanneen 12 oli ta'an ammoo miidhamuusaanii, Obbo Addisuu Araggaa, Itti gaafatamaan Biiroo Dhimma komunikeeshiinii Oromiyaa dhiheenya kana fuula Feesbuukii isaanii irratti ibsaniiru.
Haaluma walfakkaatunis Godina Hararge bahaatti namoonni lama madaa'uusaanii caqasanii turan.
Ofeeggannoon imalaa yoom dabra?
Goodayyaa suuraa Sodaan shororkeessummaa, mormiin uummataa fi balaan dhibee yogguu uumamu, ofeeggannoon imalaa bahuu danda'a.
Biyyoonni lammiilee isaanii imala gara biyyoota garagaraatti taasisan irra deebiin akka ilaalan gorsu.
Hajaan Alaa Ameerikaa akka ibsutti - ofeeggannoon imalaa biyya tokkorra kan kaa'amu, naannawa sanatti sodaan nageenyaa jira jedhamee yommuu shakkamudha jedha.
Fakkeenyaaf, hokkorri yeroo filannoo, diddaan uummataa yogguu jiraatu akkasumas balaawwan uumamaa kanneen akka: haarikeeniiff hoollannaan lafaa yogguu uumaman gorsi imalaa biyya tokkorra kaa'ama.
Haaluma walfakkaatuun mootummaan Kaanaadaas - rakkoon nageenyaa odeeffannoon deeggaramee fi ogeeyyiin yommuu mirkaneessan, gorsi imalaa akka bahu ibsa.
Kana malees mootummoonni biyyootaa, sodaan shororkeessummaa, mormiin uummataa fi balaan dhibee yogguu uumamu, ofeeggannoon imalaa bahuu danda'a.